ဝမ် Xizhi ရဲ့ လက်ရေးလှ "ဒီ သစ်ခွ Pavilion " - နာမည်ကျော် လူမှုရေး - နာမည်ကြီးပြောပါ
ဝမ် Xizhi ရဲ့ လက်ရေးလှ "ဒီ သစ်ခွ Pavilion "
ဝမ် Xizhi, 361 နှစ်အေဒီ 303 နှစ်ဟန်နိုင်ငံသား, တရုတ် Langya Linyi (ရှန်ဒေါင်း၏ယခုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု) တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး, နောက်ပိုင်းမှာသူဟာခရိုင် Sanin ကောင်တီ (ယခု Zhejiang Shaoxing) သို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်သူသည်အရှေ့ Jin ကမင်းဆက်ကြီးမြတ်လက်ရေးပညာရှင်ဖြစ်ပြီး, အထွေထွေ Youjun ၏ရာထူးမှထ။ ဝမ် Xizhi ရဲ့လက်ရေးလှဟာအလွန်မြင့်မားတဲ့အနုပညာတန်ဖိုးနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ, ကမ္ဘာကြီးကိုလက်ရေးလှအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
မတ်လအတွက်အရှေ့ Jin က Mudi Yong ကိုးနှစ် (အေဒီ 353 နှစ်) သုံးရက်, 41 ကလူဝမ်နှင့် Xie က Sun က Chuo နှင့် Sanin အခြား Lanting ပြုပြင်ရှီစီးတီး (ယခု Zhejiang Shaoxing), ကဗျာနှင့်အတူအသီးအသီး, စီးရီးအတွက် "အဆိုပါ ကျမ်းစာ၌ရေးထားလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အစပြုပေးလိုက်တော်မူသောသစ်ခွ Pavilion "ဝမ် Xizhi, စာရေးသူဖော်ပြရန်, Lanting ရှုခင်းဝန်းကျင်စုဆောင်း၏ဂုဏ်အသရေနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏ခံစားချက်ဖော်ပြထား, ရှည်လျားသောအပေါ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအသက်နှင့်သေခြင်း၏အနိစ္စဟာကြာရှည်မခံခဲ့ပါ။
"ဒီသစ်ခွ Pavilion" တွင်ဝမ် Xizhi wrote:
, ရေရဲ့အစွန်းမှကံမကောင်းပျော်ရွှင်မှုကိုလှုပ်ရှားမှုများရှာအံ့သောငှါခဲ့ကြသည် Hueiji ဇွန် Cheng Sanin ကောင်တီအတွင်းရှိပါတီ Lanting (နာမည်ကြီးတွေ '), မတ်လစတင်, Guichou နှစ်ပေါင်းကြောင်း Yonghe ကိုးနှစ်။ အများစုမှာဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပါရမီလူတွေကိုနုပျို, ဒါပေမယ့်လည်းအဟောင်းတွေရှိတယ်, လာကြပြီ။ ဤတွင်အရပ်ရှည်ရှည်တောင်များနှင့်မတ်စောက်ခေါင်များမှာသိပ်သည်းတောအုပ်နှင့်အရပ်ရှည်ရှည်ဝါးရှိပါတယ်, ရေ Rapids, ထွန်းလင်းပတ်လည် (အကို kiosk) သို့မဟုတ်ဒါရှိပါသည်။ အဆိုပါရေ (တဲ) မြို့ပတ်ရထားမြောင်းမှလမ်းကြောင်းပြောင်းနှင့် (သောက်စရာယူလူတို့အဘို့) အဖန်ရေအပျော်ဖောင်စီးခြင်းကြကုန်အံ့။ လူများ, စိတ်နှလုံး၌သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြရန်လုံလောက်သောပျော်ရွှင်မျှခမ်းနား orchestral ensemble လည်းမရှိပေမယ့်, ထိုင်လျက်နောက်တစ်နေ့ Qushui စီစဉ် (သို့သော်) ကဗျာ၏ဘေးထွက်သောက်သုံးနေစဉ်နေကြသည်။
ဤသည်နေ့ရက်တွင်, ရာသီဥတုညင်ညင်သာသာမှုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လေတိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ က ah ပျော်ရွှင်ရကျိုးနပ်သည်, ဒါလုံးဝ၎င်း၏အမြင်နှင့်အာရုံခံစားခြင်းဖြင့်ကုန်ဖွင့်လှစ်ထားရှိသောဒေါင်လိုက်မျက်စိ, ပြသနိုင်ဖို့, မြေပြင်ပေါ်တွင်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာကိုဆင်းရှာဖွေနေသည်လက်နက်ဖြစ်၏မိုဃ်းကောင်းကင်၏အများစုတက်ကြည့်ပါ
ပြည်သူ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြား, Fuyangzhijian တစ်သက်တာအတူလျှောက်တွင်ရယူပါ။ သူတို့စားစရာခံစားချက်များကိုစိတ်ဝင်စားသောအရာတို့ကိုနှင့်အတူအချို့သောလူများ, မဆိုသတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အလိုလိုကျလှနျးခွငျးဘဝ; အချို့လူများကပျော်စရာရည်မှန်းချက်, (မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူ) အခန်းထဲမှာစကားပြောဆိုရင်ဆိုင်ရမကျြနှာကို၎င်းတို့၏အသိအကြောင်းပြောဆိုရန်ကြိုက်တယ်။ အဆိုပါ (လူတွေရဲ့) ဝါသနာနေသော်လည်း (အမှုအရာအခါ) ထိုသူတို့ကြုံတွေ့ရဖို့ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြ (သို့မဟုတ်) ယာယီ (ပျော်ရွှင် Self-လုံလောက်သောကိုသင်လိုချင်တဲ့အရာ (များအတွက်) တစ်ခုခု, get အခါ, ကွဲပြားခြားနား, ဒါမှမဟုတ်ငြိမ်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနေသော, တူညီတဲ့မဟုတ်ပါဘူး အမှန်တကယ်) လာမည့်အိုမင်းမထင်ကြဘူး, အမှုအရာဟာသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအဘို့အခံစားရသို့မဟုတ်ပင်ပန်းရသည်အထိ, စိတ်ခံစားမှုဟာ (လက်ရှိ) အခွအေနေအမှုအရာသည်ချိုသောခံစားရမတိုင်မီ, ရေတွင်းများတက်ခံစားနေရတယ်, ပြောင်းလဲလက်ငင်း, ဖြစ်လာအဖြစ် အဆုံး (အလိုတော်) နောက်ဆုံးအတိတ်ကအရာ, ကောင်းသောကံကြမ္မာနှင့်အတူထိုကြောင့်တတ်နိုင်သမျှပေမယ့်နေဆဲအဆုံးမဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် (ဘဝ) အရှည် (ဖြစ်နိုင်သည်) ။ ရှေး said: ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဝမ်းနည်းမနိုင် "မရဏာနိုင်ငံနှင့်အဘဝသည်လည်းကြီးမားသော ah များမှာ!"!
ငါသည်သင်တို့ကိုကြုံတွေ့ရ (ငါထင်) ပါလျှင်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ၏အကြောင်းပြချက်ယခင်ဖြစ်ပျက်မှုကိုတွေ့မြင်အတူတူပင်, (ငါ) စိတ်ဆိုးနဲ့ဝမ်းနည်းဖွယ် (မိမိတို့၏) ဆောင်းပါးရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကြဘူးအခါတိုင်း, ငါ၏နှလုံး၌စကားထုတ်ဖော်ပြောဆိုမရနိုင်ပါ။ (ငါ) ပြီးသားဘဝနှင့်သေခြင်းအညီအမျှစိတ်ပျက်ဖွယ်ကုသနေကြသည်ကိုသိသည်အသက်ရှည်ခြင်းနှင့်ရေတိုနေထိုင်ခဲ့မှားချဉ်းကပ်မှုပမာဏမှာတူညီ။ ယနေ့လူဟာအရင်ကဲ့သို့တူညီ, ဝမ်းနည်း ah ကိုကြည့်အဖြစ်သားစဉ်မြေးဆက်, ယနေ့ကြည့်ရှု! ဒါနဲ့ဇာတ်ကြောင်းကိုယူ (ထို့နောက်), သူတို့ (ကဗျာ) မှတျတမျးတငျထားတဲ့သူ (မတက်ရောက်) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြိမ်ပြောင်းလဲခဲ့ကြရင်တောင်ကမ္ဘာကြီးကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ပြဿနာ (အရာ) ကိုအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် (ကလူ), ကွဲပြားခြားနားသည်။ စာဖတ်သူများ၏အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်ကိုတုံ့ပြန်ရန်လည်းချီတက်ပွဲ၏ကဗျာဖြစ်လိမ့်မည်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာစုပေါင်းလည်းခရစ်ယာန်ဘာသာအဖြစ်လူသိများအမျိုးမျိုးသောဂိုဏ်း၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်၏။ 1st ရာစုအေဒီ ...
Leonardo da Vinci ရဲ့ နာမည်ကျော် ပန်းချီကား
Leonardo da Vinci ၏ (ဧပြီလ 23, 1452 - မေလ 2, 1519), ဥရောပ Renaissance ပါရမီသိပ္ပံပညာရှင်တီထွင်သူပန်းချီဆရာ။ ခေတ်သစ်ပညာရှ ...